“Maxamed Baashe Noloshiisii Dhalinyarnimo, Wuxuu U Huray Halgankii Hubaysnaa Ee Dib Loogu Xoraynayey Dalka”Aqoonyahan Xamse Khayre, “ . |
“Maxamed Baashe Noloshiisii Dhalinyarnimo, Wuxuu U Huray Halgankii Hubaysnaa Ee Dib Loogu Xoraynayey Dalka”Aqoonyahan Xamse Khayre, “ .
“Madax-banaani Markan”: Dood ka dhan ah Aragtidda “Midnimo Markale” Ee Maxamed Baashe.
Maxamed Baashe Noloshiisii Dhalinyarnimo Wuxuu U Huray Halgankii Hubaysnaa Ee Dib Loogu Xoraynayey Dalka, kaas oo Uu Muruq iyo maskaxba galiyey. Qiimaha ay Somaliland ku joogto isaga u malayn maayo in dhallinyaradda ku jirta FB intooda badan (99%) ee ku maagaysa fikirkiisa “MKM” ay naf-hurkiisa iyo tacabkiisa oo kale galiyeen dalka.
Waxaan is-weydiiyay malaha waxa haboonayd in laga dooddo waxa keenay in Maxamed Baashe oo kale oo waqtigiisii iyo cimrigiisii ku bixiyay dalkan iyo dadkan inuu xor noqdo, in uu si is-ciil kaambi ah, quus ah, isla markaana cadho ka muuqato u mar keliya u beddelo mawqifkiisii “Somaliland Xor ah oo Madax-banaan? Dabcan, waa go’aan mug iyo miisan leh oo aanu si fudud u gaadhin oo ku jooga jiritaankiisii oo dhan? Maxaa dhacay ee ku kalifay inuu gacantiisa ku bi’iyo guushii uu gacantiisa lafteeda ku dhaliyay? Mise wali halgankii buu ku jiraa oo taaggaa waaba lexo-jeclo iyo badbaaddo qaran?
Kolayba anigu lama qabbo fekerkiisa iyo mawqifkiisa cusub aadna waan uga soo horjeedaa taasi se igama indho saabayso inaan wax iska waydiiyo dareenkiisa waxaa xilligan gaarka ah keenay. In lala dooddo oo lagu ekaaddo mawqifkiisa iyo aaraadda uu inala wadaagayna waa midh bisayl iyo korniin tusi lahayd runtii.
Waxaan aaminsan nahay in qaddiyadda Somaliland iyo madax-banaanida ay la soo noqotay tahay go’aan loo aayay lana mahadiyey tan iyo maalintii Burco 1991-kii lagaga dhawaaqay. Waxaa la badbaadiyay dhiiga dad badan kadib soo-af-jarridii colaadihii sokeeye, waxaa la dhisay dhamaan magaalooyinkii dhulka lala simay, waxa dib loo dhisay dugsiyaddii, waddooyinkii iyo xataa dadkii baa la dhaqan celiyay. Waxaa la dhisay ciidan ku dhow 30,000 oo askari, nabadgelyo taam ah, calan ay dadku cisi iyo sharaf ku hoos noolaayeen 30 sanno. Waxaa dib loo unkay nidaam dawladeed dimuquraadi ah, doorashooyin iyo dawladnimo seeskeed. In ka badan nus milyan caruura ayaa dugsiyada ku jira oo loo suurtagaliyay mustaqbal ka fiican ka aanay nasiibka u helin walaalaha Soomaaliya ubadkooddu. Guulahaas oo dhan cid dadku ka martiyay ma jirto, ciidan shisheeyana hadalkii daa isaga. Dad tashadday, yuhuun wada-jir iyo kalsooni baa lagu gaadhay.
Waxaas oo dhan oo jira haddana ma qabyo la’a, waxaana wali maqan cadaallad, sinaan iyo sedqaybsi loo dhan yahay. Waxaa la ragaadiyey oo dib loo celiyay wax wada lahaanshihii iyo wada-jirkii dadka. Boobka iyo dhaca hantida umadda ayaa lagu mamay in dhawaale oo la caadaystay. Ceebahaas oo haddii aan waxba laga qaban fashilin kara dedaalkii umadda waxaan qabaa in aanay wali gaadhin in la yidhaa “baabi’iyaay”. Waa la badbaadin karaa tacabkii umadda, waana fulaynimo in laga cararaa.
Markaan u soo noqda mawqifkayga waxaan aaminsanahay In qaddiyaddu ku taagan tahay lugo adag oo aan loo cabsan xataa iyadoo 10-kii sano ee u dambaysay hogaaminta Kulmiye xagal-daacisay. Waxaan qabaa in hogaaminta lagu hungoobay oo la saxo lagu badbaadin karo qaranka balse aan qar-iska-xoornimo kale furnayn xiligan.
Ugu dambayntii waxaan aaminsan nahay in arinta Somaliland aan lagu tigtigin doodda ma-dhalayska ah ee labadda aan dan iyo xal toona ku jirin ee dadka la kala dooran siiyo had iyo goor : Midnimo & Madax-banaani.
Mashkiladeenu maaha Midnimo; mana aha madax-banaani. Mashkiladeenu waxay tahay taalaa dooddan kale ee ah :siddee baynu u dhisnaa dalkeena, dadkeenana ugu samaynaa nolol, horumar, cadaallad, xasilooni iyo ammaan? Himiladaas xaqiijinteeda iyo gaadhisteedu uma af duubna midnimo koonfureed iyo madax-banaani waqooyi toona. Waddo kasta oo halkaa lagu gaadhi karo anigu waxaan qabaa in loo maro. Taa imika la hayo ee ah “Somaliland Madax-banaan” ayaan ilaa imika u arkaa iney tahay ta loogu qaatay xataa iyadoo dib-u-dhacyo hogaamineed oo nabarro badan u yeelay jiraan. Tii shalay lagu hungoobay lana tijaabiyey ee midnimo mar kale ilama qumana. Maxamed Baashena ma sheegin qaaciddo iyo hal-abbuur u guuldarraddii midnimaddii shalay fashilantay uu kaga midho dhalinyo. Taa bedelkeeda wuxuu sheegay in Somaliland Fashilantay; In Somaaliya Fashilantay iyadduna. Kadib wuxuu ku taliyay in labadda fashil mar kale la mideeyo si loo guulaysto. Xisaab ahaan xataa sax maaha in marka fashil lagu darro fashil kale ay guuli iyo faan dhalayso. Aynu markan madax-banaanida 30 jirstay waxa ka maqan ka shaqayno ayaan odhan lahaa.